ကျွန်ုပ်နှင့် ဟင်းမွှေသည့် ယောက်မ (၂) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ကျွန်ုပ်နှင့် ဟင်းမွှေသည့် ယောက်မ (၂)	Posted by mm thinker on June 7, 2016
Posted in: Satire, Uncategorized.	Tagged: Satire.	Leaveacomment
ကျွန်ုပ်နှင့် ဟင်းမွှေသည့် ယောက်မ (၂)
တဖန် အင်ဖော်မေးရှင်းကို မဆအင်တန်ပေးသည့် မုခစာအုပ်တည်းဟူသာ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို လျစ်လျူရှုပြီးလျှင် စာအုပ်ပုံကို မွှေလေရာ ဖတ်လက်စတန်းလန်းဖြစ်သည်ဟု လျှပ်စာအုပ်ဓာတ်ပြား ကင်ဒဲလ်က ပြသောကြောင့် မနောမယ မြသက်လယ်ကို ဖတ်ပြန်၏။ အလွန်တရာ ခေါင်းရှုပ်သောကြောင့် ဗေဒင်၊ လက္ခဏာများကို ကျော်ချရာ စာအုပ်ပြီးပြန်၏။
လျှပ်စာအုပ်ဓာတ်ပြား ကင်ဒဲလ်ကို မွှေသည့် အခါ၌ ဖတ်နေသည်ဟု ငနုချောင်း ကိုယ်တော် Ashin Vilasaggalankara ကို ပြောကာ ဆက်မဖတ်ဖြစ်သော ဝေါဟာရတ္ထ ပကာသနီကို လည်းကောင်း၊ လုံးတော် ဆရာတော်၏ ပကိဏ္ဏက ဝိသဇ္ဇနာကျမ်းများကို လည်းကောင်း၊ ဝါပိုလာ ရာဟုလာ၏ သီရီလင်္ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းကို ဆရာတော် ကေလာသ ဘာသာပြန်သည့် စာအုပ်ကို လည်းကောင်း၊ သခင်ဘသောင်း ဘာသာပြန်သည့် သူခိုးအာမက် ဝတ္ထုကို လည်းကောင်း၊ မင်းသိင်္ခ၏ မနောမယ ကိုပီတာကို လည်းကောင်း ဟိုစာမျက်နှာ၊ ဒီစာမျက်နှာ လှန်ကာ ဖောရှော ဖတ်ထားသည်ကို ရှက်ဖွယ်ရာ သတိပြုမိလေတော့၏။
သို့သော် မတောက်တခေါက်ဖြင့် များစွာ လူလုံးပြချင်သည့် အားလျော်စွာ အော်စကာ ဖွန် ဟင်နူဘာ၏ ပါဠိ စာပေ လက်စွဲကျမ်းကို လည်းကောင်း၊ လန်ဒန် ပါဠိအသင်း၏ ကတ်တလောက်ကို ရှိမှ ရှိစေတော့ဟု လည်းကောင်း၊ မေဘယ် ဘုတ်၏ မြန်မာပြည်မှ ရှေးဦး ပါဠိသဒ္ဒါ ဆရာများဟူသော စာအုပ်၊ ဆောင်းပါးတို့ကို လျှပ်စာအုပ်ဓာတ်ပြား ကင်ဒဲလ်သို့ ထည့်ရပြန်၏။
တဖန် ဘယ်လောက် မှတ်မှတ် မေ့တတ်ပြန်သည့် သင်္ဂဇာပေါင်းချုပ် ဥပမာသမူဟဂီရက္ကမ စာအုပ်ကို လည်း ထည့်ကာ အဆုံးသတ်၏။
အချုပ်ကား ဤဂါထားသည်သာ နှလုံးသွင်းရန် သင့်၏ဟု မိုက်လုံး ဆက်ကြီးမိတော့သတည်း။
ယာဝဇီဝမ္ပိ စေ ဗာလော၊ ပဏ္ဍိတံ ပယိရုပါသတိ။
ယောက်မသည် ဟင်း၏အရသာကို မသိသကဲ့သို့ မိုက်သူသည် အသက်ရှည်သမျှ ကာလပတ်လုံး ပညာရှိကို ဆည်းကပ်စေကာမူ သူတော်ကောင်းတရားကို မသိနိုင်။
Even ifafool associates with someone wise throughout his life, he never knows the path of wisdom (Dhamma) as the spoon never knows the taste of the soup.
← ကျွန်ုပ်နှင့် ဟင်းမွှေသည့် ယောက်မ (၁)	ဒေါ်ဓမ္မစာရီ၊ ဦးမောင်ကြီး နဲ့ ထေရီထေရာ ဘာသာပြန် →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...